Ndezvipi zviitiko zvebhasikoro muTokyo Olympic Games? | ebike Shuangye
musha Blog Electric bike knowledge Ndezvipi zviitiko zvebhasikoro muTokyo Olympic Games?
Zuva ： 2021-07-21 Zvikamu:Electric bike knowledge Views: 2,475 maonero
Mitambo yeTokyo yakatanga kurongerwa kuitwa muna 2020 uye yakamisidzirwa kuenda muna 2021. Yava kuda kuitwa. Imwe yeOlympic chiitiko chakakura chinokwezva kutarisisa kubva pasirese pasirese. Kuunganidzwa kwevatambi vakatanhamara vanobva munyika dzakasiyana kunonakidza chaizvo.
Mitambo yeTokyo ichaitwa kubva munaChikunguru 23 kusvika Nyamavhuvhu 8, 2021, kwemazuva gumi nemanomwe, iine zviitiko zvakakura makumi matatu nematatu uye makumi matatu nematatu zviitiko.
Nhangemutange yebhasikiti yeOlymicic yakavhurwa mumitambo yekutanga yeAthens maOlympic muna 1896. Pakati pavo, bhasikoro chirongwa chakakamurwa kuita zviitiko zvina zvikuru: mugwagwa, munda, gomo uye BMX (yemahara uye yekumhanyisa madhaka).
Saka, ndedzipi nzvimbo dzenzvimbo dzekuchovha mabhasikoro eMitambo yeOlympic yeTokyo?
1, Fuji Yepasi Pese Speedway
Fuji International Circuit ndiyo yepedyo mijaho yekumhanya kunzvimbo yeTokyo. Seyazvino dunhu repasi rese, iyo Fuji International Circuit ndiyo zvakare dunhu repamberi mumaziso evajaho nenhau, uye saka inzvimbo yakanaka kwazvo yemakwikwi.
Makwikwi chinhu: mumigwagwa mabhasikoro
2, Izu Mountain Bike Dunhu
Iyo nzira yekuyambuka-nyika ine hurefu hwese hwe4,100 metres uye musiyano wehurefu hwemamita zana nemakumi mashanu.
Makwikwi chinhu: gomo bhasikoro
Nhandare iyi ine 250-mita-refu track inosangana nematanho eInternational Cycling Union (UCI).
Makwikwi chinhu: track bhasikoro
4 ， Ariake nhandare
Ariake nhandare iri pamahombekombe egungwa akanaka munzvimbo yeAriake, padyo nemumhanyi musha uye IBC / MPC.
Makwikwi zvinhu: Freestyle BMX, BMX mujaho
International Olympic Committee ine ndima iyi muchikamu che "Olympic Principles" mu "Olympic Charter": "Munhu wese anofanirwa kunakidzwa nemukana wekuita mitambo pasina chero rusarura, uye kuratidza kunzwisisana, Mweya weOlympic wehukama, kubatana uye makwikwi akanaka ”. Inonziwo mweya wemazuva ano weOlimpiki.
Panguva imwecheteyo nemakwikwi, isu tinofanirwa kuramba tichipfuuridza mweya weOlympic.
Tags:bhasikoro kuchovha Tokyo Olimpiki
Prev: Nguva yechando kutasva, iwe unofanirwa kuziva zvinoonekwa
Next: Ndezvipi zvakanakira mabhasikoro emagetsi? 5 zvakanaka!
urban electric bike ne 250W silver motor A3AL24
Bike yemagetsi ine mutengo wakanaka wenyika "Imwe Belt uye Imwe Road" nyika
kusungirirwa kaviri bhasikoro motokari A6AH26-S